ဘဝဟာ ခရီးတစ်ခုပါ – Live the Dream
လူတိုင်းမှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ကျောင်းသားဘဝတုန်းက အမှတ်များများရဖို့နဲ့ ဂုဏ်ထူးများများပါခဲ့ရင် တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတက်ဖို့ ရည်မှန်းခဲ့ကြတယ်။ နေ့ညမနားကြိုးစားပြီး အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတက်ရပြန်တော့လည်း အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့ လစာကောင်းကောင်းရပြီး မိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့က ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာရပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကကော တကယ့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်လားဆိုပြန်တော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ထင်တာက ပန်းတိုင်မှာ ပျော်စရာတွေနဲ့ကြီးပဲ ဝန်းရံနေမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ အောင်မြင်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာ ခဏတာပါပဲ။ တချို့က ရည်မှန်းချက်တစ်ခု မအောင်မြင်ခဲ့ရင် ဘဝတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးလိုက်သလို ဘာမှဆက်မလုပ်ဘဲ အရှုံးပေးလိုက်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း မိသားစုအချိန်တွေ၊ ငယ်ရွယ်မှုတွေကို စတေးပြီး ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့ကိုသာ အာရုံစိတ်ထားတယ်။ တကယ်တမ်းအောင်မြင်လာတော့ ဘေးမှာတူတူ ပျော်ပေးမယ့် ဘယ်သူမှမရှိဖြစ်ရပြန်တယ်။ တကယ်တော့ ဘဝဆိုတာ ဂိမ်းတစ်ခုလို အဆုံးသတ်မရှိပါဘူး။
ခရီးရှည်ထွက်နေရသလို ခြေလှမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းနေရတာပါ။ခြေချော်တဲ့အခါလည်းရှိနိုင်သလို လမ်းကြောင်းပေါ် တည့်မတ်စွာ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့အခါလည်း ရှိမှာပါပဲ။ လဲကျတဲ့အခါ နာကျင်မှုတွေကနေ သင်ယူရင်း ပြန်လည်လျှောက်လှမ်းကြရမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ပေါင်းများစွာကို မိသားစုနဲ့အတူ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ တက်ကြွစွာလျှောက်လှမ်းရင်း ခရီးရှည်ကြီးကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းကြမယ်။
‘If you can’t fly, then run. If you don’t run, then walk. If you don’t walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward.”